Mashiinka xareynta jalaatada, Mashiinka qaboojiyaha jalaatada, Isku darka miraha - Runchen
Hogaamiyaha caalamiga ee wax soo saarka technolooy
La socodsii fikradahaaga, waxaan uga dhignaa inay si otomaatig ah ugu rumoobaan.
xoqida iyo xarig jarista
Alaabada usha ku xiran / badeecada fiiq-furka / koonka jalaatada / koob / block jeex
Ku buuxi jalaatada, sorbet, badeecooyinka biyaha barafka ku jira koonooyinka, koobabka iyo weelasha waaweyn ee qaababka kala duwan leh, qaabeynta iyo cabirka.
Runjin © Krunt ™ -G4 Baraf ...
Ku saabsan RUNJIN
Runjin wuxuu lahaa seri ...
Shiinaha gudahiisa, magaalooyin badan iyo ka badanba waxay bilaabeen inay ku noqdaan nolol caadi ah, waxayna ku noqdeen shaqadii xafiiska sidii caadiga ahayd. Rakibaadda goobta iyo komishanka saameyn kuma yeelan doono. Mashruuca socda ee dibedda, waxaan ...
Mahadcelin ka timid ...
Waxaan la shaqeynay shirkadda Unilever sannado badan. Bishan waxaan ka helnay faallooyin wanaagsan macaamiisheenna. Runtii aad ayey nooga shaqeysaa inaan sifiican usameyno .Kooxdeenna Runchen oo dhan ah waxay sii wadi doonaan inay sameeyaan dadaalkeena ku aaddan baaritaanka ...
Waxaan fahamsanahay in habka wax soo saarka saxda ah iyo naqshadeynta qaabeynta iyo qaabeynta tayada adeegga xarunta dhaqaale ay hubiso waxtarka sare ...
Ku saleysan adeegyada macaamiisha u janjeedha iyo faa'iidooyinka farsamo, Runchen waxaa ka go'an qalab tayo leh iyo adeeg aad u wanaagsan ...
Adeegyo hufan oo ku saabsan baahidaada. Waxaan hubineynaa in qalabkaagu ku shaqeynayo xaalad habboon, marka lagu daro, waxaan awoodnaa inaan taageerno ...